Etu esi lelee egwuregwu NBA All Star 2016 | Akụkọ akụrụngwa
Etu esi lelee egwuregwu NBA All Star 2016
Nke a na izu ụka a na-egwuri ke obio Toronto ahụ NBA All Star 2016 nke malitere na Fraịde gara aga site na egwuregwu nke ndị rookies na ndị na-egwu egwu nke afọ abụọ, bụ ndị e kewara ụzọ abụọ ugbu a dịka mba ha si. Taa, na mgbe asọmpi ahụ mere ụnyaahụ, taa bụ ntụgharị nke egwuregwu kpakpando niile, ezigbo mma nke izu ụka a. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhụ ya ka ọ dị ndụ, taa anyị kọwara n’ederede a kọwara etu esi lelee ma soro ya ka ị ghara ileghara ihe ọ bụla anya.
Egwuregwu ga-eme na 02: 00 na Spain nwere ike ịgbaso n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche. Ihe ọ bụla ị ga - eme bụ ịrahụ ụra na - ahụghị egwuregwu a zuru oke nke anyị ga - enwe ike ịhụ Pau Gasol maka oge nke isii, gbaa akaebe banyere akụkọ Curry kwadebere maka anyị, ikekwe taa onye ọkpụkpọ kacha mma na NBA na n'ofe niile nke akụkọ mgbe ochie dịka Kobe Bryant, onye na-ese okwu All Star ikpeazụ ya taa.
1 Ebee ka ikiri All Star 2016 na TV
2 Nhọrọ ndị ọzọ iji lelee egwuregwu ahụ ndụ
3 Zọ ndị ọzọ ịgbaso NBA All Star 2016
4 Netwọk mmekọrịta, ohere ọzọ
Ebee ka ikiri All Star 2016 na TV
Iji lee egwuregwu nke kpakpando NBA na telivishọn anyị ga-enwe naanị otu nhọrọ, ọbụlagodi na Spain na nke ahụ bụ naanị ụzọ ị ga-esi agbaso ya ga-abụ site na Movistar +, nke ga-agbasa egwuregwu ahụ site na ọwa ọhụrụ ya # 0, ochie C +. Na mgbakwunye, ọ ga-ekwe omume ịgbaso ya site na C + Deportes.
Ọ bụrụ na ibi na mpụga Spain, ezigbo nhọrọ iji nwee bọọlụ basketball kacha mma n'ụwa bụ ịnwale ịkụ otu ọwa telivishọn America ga-agbasa egwuregwu ahụ. Ndị a bụ NBA TV, TNT na ESPN. N'ezie, ọ bụghị mba niile nwere ike ịnabata chanel ndị a, yana ọbụlagodi n'efu.
Nhọrọ ndị ọzọ iji lelee egwuregwu ahụ ndụ
Egwuregwu kpakpando niile na-abụ nnukwu ihe omume nke ngwụsị izu All Star ma ọ bụ na naanị site na ịlele quintets onye na-achọpụta ihe kpatara ya. Na Nzukọ Ọwụwa Anyanwụ anyị ga-ahụ LeBron James, Carmelo Anthony, Dwyane Wade, Paul George na Kyle Lowry kwụ n'ahịrị. Maka akụkụ ya na Nzukọ Ọdịda Anyanwụ anyị nwere ike ịnụ ụtọ Kobe Bryant, Stephen Curry, Kevin Durant, Kawhi Leonard na Russell Westbrook, Oklahoma City.
A ezi nhọrọ na-enwe oké egwuregwu a ndụ nwere ike ịbụ site na ndenye aha na NBA League Pass, usoro ihe eji egwu egwu nke NBA, ekele nke maka 11,99 euro anyị nwere ike ịhụ egwuregwu zuru ezu, dị ndụ yana nkọwa mbụ. Na mgbakwunye, anyị nwekwara ike ịnụ ụtọ nnọchi nke dunk na asọmpi atọ na ihe niile na-eme ma ọ bụ mere na All All Star a.
N'ikpeazụ ị nwekwara ike ịlele egwuregwu ahụ Yomvi, ọ bụ ezie na a naghị atụ aro nhọrọ a nke ukwuu, ebe ọ bụ na ị ga-abụ onye debanyere aha na Movistar +, nke ga-enye gị ohere ịhụ ya n'ụzọ ndị anyị kwurula. Ikekwe ọ nwere ike ịbụ nhọrọ ma ọ bụrụ na ị ga-arụ ọrụ ma ọ bụ na ị gaghị anọ n'ụlọ maka ihe ọzọ.
Zọ ndị ọzọ ịgbaso NBA All Star 2016
Y’oburu n’achoghi isi soro ndi All Star na onyonyo n’ihi na odighi uzo obula iji hu ya ka o di ndu ma obu n’ihi n’achoghi, echegbula onwe gi na odi uzo ozo iji soro egwuregwu kpakpando nile nke egwuru echi ya.
Otu n'ime ha nwere ike ịbụ Site na redio. Na Spain, ọ nweghị ọwa mba ga-agbasa egwuregwu ahụ, mana n'ezie ụfọdụ mpaghara ebe enwere ụfọdụ ndị hụrụ basketball n'anya ga-agbasa ya. Tụkwasị na nke ahụ, ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri America ga-eme ihe pụrụ iche banyere ihe omume ahụ, ọ bụ ezie na n'ezie, maka nke ahụ, ị ​​ga-enwerịrị ike Bekee ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịghọta ihe.
Netwọk mmekọrịta, ohere ọzọ
N’ikpeazụ ụzọ ọzọ dị mma isi soro All Star bụ site na netwọkụ mmekọrịta. NBA dị na Facebook, Twitter ma ọ bụ Instagram ebe a na-eziga vidiyo na ihe oyiyi oge niile iji nwee basketball kacha mma n'ụwa. Na mgbakwunye, netwọkụ mmekọrịta nke otu ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ ga-esochikwa ihe omume ahụ.
Mgbe ahụ anyị na-ahapụ gị ejikọta ụfọdụ profaịlụ kachasị mkpa ị nwere ike ịgbaso All Star;
Pau Gasol's Twitter
Official Hastag nke ihe omume #NBAAllstarTO
Canal + ukara hastag #Ihi ụra
Dịla njikere ịnụ ụtọ NBA All Star nke a ga-eme taa na 02: 00 na Toronto?. Gwa anyị ma ọ bụrụ na ị ga-ekiri egwuregwu nke kpakpando nke egwuregwu kachasị mma n'ụwa, otu ị ga-esi mee ya ma ọ bụrụ na ị ga-abụ otu n'ime ọtụtụ ndị na-enwe obi ụtọ na Pau Gasol ma ọ bụ onye ọkpụkpọ ọzọ. Nwere ike iji oghere edebere maka ikwu okwu na post a iji gwa anyị gbasara ya ma ọ bụ netwọkụ mmekọrịta anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Etu esi lelee egwuregwu NBA All Star 2016
Igodo na ntuzi zụta smartwatch zuru oke maka gị
Xiaomi Mi4c, ezigbo anumanu nke nwere onu ahia n’ime mmadu nile